I-In-Law Suite ehlanganisa Igumbi Lokuhlala kanye Nekhishi - I-Airbnb
I-In-Law Suite ehlanganisa Igumbi Lokuhlala kanye Nekhishi
Greensboro, North Carolina, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Katie
Woza uphumule futhi ujabule endaweni eseduze nayo yonke into edolobheni! Sihlala endaweni ethulile ezungezwe izihlahla ze-oki ezinhle. Siseduze nendawo emaphakathi kodwa siqhelelene endaweni ethulile, kude nesiphithiphithi somgwaqo omkhulu. Jabulela ukudla kwasekuseni okulula kwe-continental kanye nekhofi ngosuku lwakho lokuqala! Sibheke ngabomvu ukuvakasha kwakho nathi!
Ngesikhala sethu unomnyango wangasese we-in law suite. Uzokwazi ukufinyelela ekhishini elinosinki, i-ovini ye-convection/microwave, isitofu, nesiqandisi. Kukhona igumbi lokuphumula elixhunywe ekhishini elinetafula lokudlela, lokudlala imidlalo yebhodi enikeziwe, noma ukwenza umsebenzi. Indawo yokulala inombhede onethezekile, ikhabethe kanye nendawo yokuphumula enosofa (oguqula ube usofa wokulala), i-TV & VHS player. Yebo, i-VHS yesikole esidala :). Zizwe ukhululekile ukufunda incwadi enhle esikukhethile noma ubukele i-VHS Disney/tape yakudala kusukela ebuntwaneni bethu! Ungakwazi ukujabulela ibhulakufesi lakho lasekuseni kanye nekhofi ngaphandle egcekeni ongakwazi ukulifinyelela usuka ekamelweni.
4.94 · 289 okushiwo abanye
Futhi sisuka e-<1mi kuphela esitolo segrosa nezindawo zokuthenga eziseduze kakhulu, amamayela angu-3.5 ukusuka esikhumulweni sezindiza, amamayela angu-3.5 ukusuka ezikhungweni zezitolo ezinkulu ezimbili, kanye namamayela angu-5 kuphela ukusuka edolobheni. Nakuba siseduze nayo yonke into, indawo yethu ithule futhi abantu banobungane!
Uma unemibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho siyatholakala futhi singathanda ukukusiza!
Hlola ezinye izinketho ezise- Greensboro namaphethelo